Askari ka tirsan Booliiska Ingiriiska oo gubay calanka Man United maxay tahay sababtu? – SBC
Askari ka tirsan Booliiska Ingiriiska oo gubay calanka Man United maxay tahay sababtu?
Ciyaartii Final-ka ee dhawaan ku dhexmartey garoonka Wembley ee magaalada London ee ka mid aheyd Finalihii Koobka FA Cup-ka ee dhexmareysay kooxaha isku magaalada ka dhisan ee Man United & Man City ayaa waxaa laga daawaday Tv-yada mid ka mid ah taageerayaasha Manchester City oo gubaya ama dab qabadiisnaaya calanka kooxda Man United.
Wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa magaalada London ayaa saaka daabacay warbixin uu ku soo bandhigay aqoonsiga taageeraha Manchester City ee gubay calanka Man United, ninkaasi ayaa wargeysku oo soo helay xogtiisa waxaana la ogaadey in uu ka mid yahay Booliiska UK.
Ninkan oo lagu magacaabo Stuart Niven wuxuu ka mid noqdey ciidamada Booliiska islamarkaana laga diiwaan galiyey wasaarada gaashaandhiga sanadkii 2006-dii isagoo fadhigiisu ahaa gobolka Scotland gaar ahaan Helensburgh, Dunbartonshire.
26 jirkan ayaa waxaa jirkiisa gaar ahaan gacmihiisa uu ku sharaxay Tatoo ama calaamado uu ku qoray ereyo sida (Pride in battle) farxada dagaalka iyadoo ciyaartaasi ay ku guuleysatey kooxda Man City ka dib gool caaqibo leh oo uu daafaca Man United la dhexmarey kubad qaabeeyaha khadka dhexe Yaya Toure.
Ninkan ka mid ah taageerayaasha jidbaysan ee Manchester City waxaa haatan lagu hayaa baaritaan ku aadan falalka uu kacay ee uu ku gubay calanka kooxda Manchester United, maadaama uu ka mid yahay ciidamada Booliiska oo iyagu u dhaxeeya bulshda oo dhan.
Askari , Stuart Niven waxaa laga yaabaa in xabsiga loo taxaabo isagoo mudan karo eedeymo ah ku xadgudub dadweyne. “Waan yara sarqaansanaa sida runta ah waxaan ahay taageere Man City, marar dadku waxay ku kacaan falal aqlaaq xumo ah gaar ahaan marka ay si aad ah u sarqaansan yihiin, hada waxaan ka walwalsanahay inaan waayo shaqadeyda” ayuu yiri , Stuart Niven oo wareysi siiyey wargeyska Daily Mail.